Naseho ny : 17 marsa 2020
Nalain'ny olona an-keriny indray i Anja, nilazany fa na handeha hanaraka azy tsy misy hatak'andro dia ho velona i Leva, na tsy handeha dia hamoy ny ainy izy. Tao anatin'izany indray no nipoiran'ilay olon-tsy fantatra mpitoraka antsamotady nanavotra azy.
Naseho ny : 15 marsa 2020
Tonga namangy an'i Haja tany am-ponja i Tefy nilaza ny vaovao momba ny lozam-piarakodia nahazo an'i Ranja sy i Mialy. Malemy tsy afaka miarina eo am-pandriana intsony i Ranja vokatr'izany. Efa saika hamono tena fa tsy afaka naka ireo fanafody nanakaiky ny fandriany satria tsy afa-niarina. Niverina ihany i Mialy rehefa saika nandao sy nahafoy ity reny nitaiza sy nanabe nampitondra fahoriana azy. Vonona ny hamela ny helony sy hikarakara azy amin'izao fahavoazany izao. Afaka nivady soa aman-tsara ihany i Mialy sy Tefy satria tsy mpianadahy, ary efa eo am-piandrasana ny menaky ny aina izy ireo.
Naseho ny : 14 marsa 2020
Nifamboraka ny tao am-pony i Ranja sy i Mialy rehefa fantatra fa manana aretim-po mitaiza azy i Mialy : ny alahelo sy ny hatezeran'i Mialy tamin'ny nataon'i Ranja tamin'i Rivo rainy nahitany masoandro ; ny fifonan'i Ranja tamin'i Mialy tamin'izay rehetra vitany hatrizay. Nohadihadiana teny amin'ny polisy i Ranja, ary voarara tsy mahazo miala ny faritra manodidina ny toeram-ponenany.
Velona i Anja, afaka. Tsy resin-tangena. Niarahaba azy nomen-janahary ny hitsiny ny mpomba azy. Saingy ny fiantraikan'izay sedra mivaivay izay no mbola tsy nifarana hatreo, na ara-batana indrindra indrindra, na ara-tsaina, na ara-panahy.
Pejy 24 amin'ny 58